कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १२ गते आइतबारको राशिफल ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १२ गते आइतबारको राशिफल !
प्रकाशित : शनिबार, असोज ११, २०७६२३:३० पब्लिक आवाज /संवाददाता
वि.सं. २०७६ असोज १२, आइतबार, इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर २९, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, दक्षिणायन, शरद ऋतु, ने.सं. ११३९ कौलाथ्व, आश्विन शुक्लपक्ष, प्रतिपदा, २२:०३ उप्रान्त द्वितीया,नक्षत्र– हस्त, २१:४७ बजेउप्रान्त चित्रा,योग– ब्रह्म, १९:२६ बजेउप्रान्त ऐन्द्र, करण– किंस्तुघ्न, ११:१२ बजेदेखि वव, २२:०३ बजेउप्रान्त वालव,आनन्दादिमा मानस योग, चन्द्रराशि– कन्या, सूर्योदय– ५:५५ बजे, सूर्यास्त– १७:५१ बजे र दिनमान २९ घडी ९ पला। व्रत/पर्व-घटस्थापना, शारदीय नवरात्रि आरम्भ,मातामह श्राद्ध, नलास्वने, घटस्थापनापूर्वक जमरा राख्ने साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा ,द्विपुष्कर योग २२:०३ बजेपछि।
आज सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । सरकार- विरोधी कार्यबाट सम्भवत टाढै रहनु होला । दुर्घटनाबाट बच्नु होला । बाहिर खान-पिनको बानीले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्दछ । कार्य समयानुसार पूर्ण हुँदैन । व्यवसायमा सम्हालिएर चल्नु होला । शिर्ष अधिकारीहरु तपाइँको पक्षमा रहने छैनन् ।
रुचिकर मित्र तथा स्वजनको साथ घुमफिरबाट आनंद- उल्लास प्राप्त हुनेछ । सुंदर वस्त्राभूषण और भोजनको अवसर प्राप्त हुनेछ । यद्यपी मध्याहन पश्चात स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नु आवश्यक छ । अधिक धन खर्च हुनेछ ।
आज पारिवारिक वातावरण उल्लासमय रहनेछ । शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नताको अनुभव हुनेछ । अपूर्ण कार्य पूर्ण हुँदा आनन्दमा वृद्धि हुनेछ । व्यवसायिक स्थलमा अनुकुल वातावरण रहनेछ । आर्थिक रूपबाट लाभ हुने सम्भावना छ । मध्याहन पश्चात मनोरंजनको अवसर मिल्नेछ । मित्र एवम् स्वजनको साथ घुम फिर र मनोरंजन स्थलमा जाने अवसर मिल्नेछ । मान और सम्मान प्राप्त हुँदा मनमा शन्तोषको अनुभव हुनेछ ।
भविष्यको लागी आर्थिक योजना बनाउन राम्रो स्कामय रहेको छ । एकाग्रतापूर्वक कार्य गर्दा कार्यमा सफलता अवश्य मिल्नेछ । कसैको साथ साथ वाद-विवाद नगर्नु होला । विद्यार्थीको लागी अनुकुल समय छ । पारिवारिक वातावरणमा शान्ती बन्नेछ । शारीरिक और मानसिकरुपबाट स्फूर्ति और प्रसन्नताको अनुभव हुनेछ ।
शारीरिक और मानसिक रूपले अस्वस्थ रहनु हुनेछ । माताको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता रहनेछ । आर्थिक रूपबाट हानी हुन सक्दछ । यद्यपी मध्याहन पश्चात आर्थिक योजनामा विचार गर्न सक्नु हुनेछ । परिश्रम अनुरूप परिणाम मिल्नेछ । विद्यार्थीलाई कार्य सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक चर्चालाई स्थगित गर्नु होला ।
गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिकता प्रति अधिक आकर्षण रहनेछ । आर्थिक रूपबाट लाभ हुने सम्भावना छ । नयाँ कार्य प्रारम्भको लागी शुभ समय छ । प्रियजनको साथ भेट हुनेछ । विरोधी माथि विजय प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । मध्याहन पश्चात स्थितिमा बद्लाभ आउनुका साथै मानसिक और शारीरिक रुपले व्यग्रताको अनुभव गर्नु हुनेछ ।
दिनको प्रथम पहरमा स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । मानसिकरुपमा ग्लानीको भाव रहनेछ । परिवारजनको साथ मर्यादापूर्वक व्यवहार गर्नु होला । नयाँ कार्य शुरुवात गर्नको लागी आजको दिन अनुकुल छैन । जीवनसाथी र सन्तानको स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु होला । चर्चा, वाद- विवादको समय मानहानी नहोस् त्यसको पुरा ख्याल राख्नु होला । स्त्री मित्रको निम्ति धन खर्च हुनेछ । शारीरिक और मानसिक अस्वस्थताको कारण उत्साहमा कमि आउनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी लाभदायक रहनेछ । गृहस्थजीवनमा सुख शान्ती रहनेछ । प्रिय व्यक्तिको साथ मिलन यादगार रहनेछ । प्रेमको सुखद क्षणको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ । आय श्रोत बढ्नेछ । शिर्ष अधिकारीको कृपा दृष्टि रहनेछ । उत्तम भोजनको प्राप्तीले सन्तुष्टि दिनेछ ।
शारीरिक मानसिक स्वस्थताको साथै तपाइँ आफ्नो कार्य निर्धारित रूपले आयोजनपूर्वक पूरा गर्न सक्नु हुनेछ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मामाघर पक्षबाट राम्रो समाचार मिल्नेछ । रोकिएका कार्यहरु आज पूर्ण हुनेछन् ।
आजको दिन शरीरमा ताजापन र मनमा प्रशन्नताको अनुभव गर्नु हुनेछ । मित्रको साथ अधिक घनिष्ठता अनुभव गर्नु हुनेछ । मित्र एवम् स्वजनको साथ लघु पर्यटन या प्रवास हुनेछ । प्रिय व्यक्तिसंगको भेटले मन आनन्दित गराउनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । भाग्यवृद्धिको प्रबल योग छ ।
परिवारमा सुख शान्ती र कुटूम्बीजनको साथ दिन खुसिपूर्वक बित्नेछ । आज तपाइँको मधुरवाणीको जादुले अन्य मानिस प्रभावित हुनेछन् । प्रवासको सम्भावना छ । मिष्ठन्न र मन पर्ने भोजनको अवसर मिल्नेछ । आयात-निर्यातको व्यापारमा राम्रो सफलता मिल्नेछ ।
व्यवसायी और व्यापारीवर्गको लागी प्रातःकालको समय अनुकूल छैन । शिर्ष अधिकारी तथा प्रतिस्पर्धीजनको साथ व्यर्थ चर्चा या विवाद नगर्नु होला । प्रवासको सम्भावना छ । अपूर्ण कार्य पूर्ण हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ७ गते मंगलबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २४,शुक्रबारको राशिफल !